Muraayadaha muraayadaha ee xumaaday Laguna Madoow / Madow - Hanukeii
Xeebta Laguna xaqiiqdii waxay ahayd barta nagu dhiirrigelisay inaan abuurno ururinta muraayadaha indhaha ee Laguna. Waxa ugu badan ee aan ka helno magaaladan yar ee xeebta ku teedsan waa godadkeeda, xeebteeda iyo coves-keeda, mid walbana wuxuu leeyahay shakhsiyad iyo tamar u gaar ah.
En Hanukeii Waxaan leenahay xamaasad leh xeebta, ku lugeynta caga-cageynta ciida, waxaan dareemeynaa in waqtiga ku haboona socodka socodka xeebta uu yahay mid weligiis ah. Waxaan sidoo kale jecel nahay moodada waxaanan dooneynaa inaan gudbino oo aan faafinno nuxurkeena.
Uruurinta Laguna waxaa si xoog leh saameyn ugu yeeshay seddex xeebood oo aan helnay markii aan ka gudubnay Xeebta Laguna waqooyiga iyo koonfurta. Dhinac, muuqaalka, midabka biyaha iyo ciidda Xeebta Jasiiradda Treasure, halkaas oo aan ka dareemaynay inaan joogno meeshii ugu fiicnayd oo aan ku bixinno fasal yoga subax hore ah, sawirro ka qaadno oo ku nasanno ciidda iyadoo laga warqabayo aragtiyo inagu xeeran. Taangiga, ku dhowaad madow madow ee 1000 Tallaabooyinka Xeebta Beach iyo tirada lagoonnada yaryar iyo jeexjeexyada aan ka helayno inta u dhexeysa geesaha qarsoon ee xeebtaan, ayaa midab siiyay mid ka mid ah moodelladayada Laguna. Waxay ku jirtay Xeebta Rockpile inaan dareemay inaan janno taabanayno. Aaggan dhagaxa badan, oo ay ka buuxaan geedo timireed iyo dhir doog ah ayaa wali ah mid qarsoodi u ah dadkii goobta isugu yimid, maadaama aan nasiib u yeelanay inaan cidna helin intii aan halkaa joognay, waxaanan dareemaynay in xeebtu innaga tahay oo annaguna aan u nahay
Waxaan fursad u helnay inaan indha indheynno qubayska iyo dadka deegaanka ee ka soo qeybgalay maalmahaas Xeebta Laguna, waxaan u oggolaannay nafteenna in ay naga qaado qaabka iyo kalsoonida Kaliforniyaanka waxaanan go'aansanay in aanaan u qaawin doonin moodelkeenna hal qaab oo keliya; Muraayadaha muraayadaha indhaha ayaa kalabar u dhexeeya qaabka retro-ka iyo indha indheynta, labaduba waa isbeddel sannadkan iyo dabcan, waa inay lahaadaan qof kasta oo doonaya inuu ku tallaabsado Xeebta Laguna.
SoMa Madow / Madow 44.95 €